प्रचण्ड – ओली सम्वन्धका आयामहरु
उस्तै–उस्तै पृष्ठभूमि सात महिनायता वामपन्थीलगायतको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले । ओली सरकारको बलियो रक्षाकवज बनेर काँध थामेका छन्, अर्का कम्युनिस्ट दल एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले । यी दुवै नेताको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने एकै प्रकृतिको छ । एउटा नेता ओली झापा सशस्त्र संघर्षको विरासतबाट उदाएका हुन् । एमाओवादी नेता प्रचण्ड […]
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा कांग्रेसको विरोध, को हुन् दिपकुमार ?
काठमाडौं, २५ बैसाख । नेपालका राजदूत दिपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । सरकारको निर्देशन नमानेको तथा आफूखुसी भारतीय पक्षसँग सम्वन्ध बनाएको लगायतका भन्दै भारतका लागि राजदूत उपाध्यायलाई शुक्रबार बसेको मनत्रीपरिषद बैठकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले […]
राष्ट्रपति भण्डारीको २७ बैशाखदेखि हुने भनिएको भारत भ्रमण स्थगित
काठमाडौंं, २४ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २७ बैशाखदेखि हुने भनिएको भारत भ्रमण स्थगित भएको छ । राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार बिहान दिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । भण्डारी २७ बैशाखदेखि ५ दिने भ्रमणमा भारत जाने गरी परराष्ट्र र भारतीय बिदेश मन्त्रालयले तयारी गरिरहेका थिए । राष्ट्रपतिका […]
श्रमजीवि पत्रकारको तलब न्यूनतम १९ हजार ५ सय हुने
काठमाडौंं,२४ वैशाख । सरकारले पत्रकारहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमजीवि पत्रकारको तलब न्यूनतम १९ हजार ५ सय हुनुपेर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी सरकारले […]
यसरी बच्यो ओली सरकार ढल्नबाट
काठमाडौं,२४ वैशाख । सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीवीच ९ बुँदे सहमति भएको छ ।यो ९ बुँदे सहमती गर्ने बाताबरण बनेपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट बचेको हो । ९ बुँदे सहमति संयुक्त सरकार गठन गर्दाका बखत भएका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र समझदारीमा वृद्धि गरेर राष्ट्रका समस्त समस्याहरुलाई एकतावद्ध भएर समाधान गर्नका निम्ति सहमतिहरु गरिएका […]
राष्ट्रिय सहमतीका लागी सरकार बनाउन सबै दल तयार भएनन् –प्र्रचण्ड
काठमाडौं, २३ बैशाख । एकिकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बन्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै यसलाई जनताको जीवनसँग पनि जोड्नु पर्ने बताएका छन् । जनताको जीवनसँग नजोडे संविधान कागजको खोष्टो हुने खतरा भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हामी समान्य अवश्थामा छैनौं, यस्तो बेला असाधारण खालको राष्ट्रिय एकता पैदा गर्नु […]
१ घण्टा ४४ मिनेट संसदमा संबोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ?
काठमाडौं,२३ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिका लागी आफू र आफ्नो दल बाधक नरहेको बताएका छन् । उनले आज व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई संबोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू र आफ्नो दल राष्ट्रिय सहमति गर्न तयार रहेको तर षड्यन्त्र र धोकाको जगमा राष्ट्रिय सहमति नबन्ने भन्दै हालैको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निमार्ण […]
एमाओवादीले बर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने
वैशाख २३, काठमाण्डौं । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरतमा जुटेको एकीकृत माओवादीले बर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक कारण देखाउँदै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको प्रस्ताव अनुसार वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्न नसकिने निर्णयमा पुगेको बताईएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आज विहान लाजिम्पाटमा छलफल भएको […]
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा गएनन् एमाओवादी मन्त्रीहरु
काठमाडौं,२३ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बोलाएको मन्त्रीपरिषद्को बैठक स्थगीत भएको छ । एमाओवादी मन्त्रीहरु नआएपछि आज बिहान बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएको बताईएको छ। बैठक पुनः बेलुका ६ बजेका लागि बोलाइएको छ। सत्ता साझेदार दल एमाओवादीले बुधबार औपचारिक रुपमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचडण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि ओली नेतृत्वको […]